संसारको सबै तरकारी मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइदा गर्ने तरकारी : स्कुस – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/संसारको सबै तरकारी मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइदा गर्ने तरकारी : स्कुस
स्कुसका तल उल्लेखित फाइदाहरू छन् । १. पो’षक तत्वको धनी स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो तरकारी पोषक तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भि’टामिन, ख’निज, र फा’इबरहरू पाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो शरी’रको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रा’मको स्कुसमा निम्नलिखित पोषकतत्व पाइन्छ । क्यालोरी – ३९ कार्बाे’हाइड्रेड – ९ ग्रा’म प्रो’टिन – २ ग्राम भि’टामिन सी –२६ प्रतिशत क’पर – १२ प्रतिशत पोटा’सियम – ७ प्रतिशत म्याग्ने’सियम – ५ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ । यस्तो खाले पोषक तत्वका साथसाथै स्कुसमा कम क्या’लोरी, फ्याट, सोडि’यम र का’र्बाेहाइड्रेड हुने गर्छ । त्यस्तै, श’रीरलाई स्व’स्थ बनाउनको लागि यो सहायक सिद्ध हुन्छ ।२. एन्टिअ’क्सिडन्टको उपलब्धता स्कुसका धेरै फाइदाहरू छन् । यसलाई श’रीरमा चाहिने एन्टिअ’क्सिडेन्टको प्रचु’रताका कारण पनि अति’गुनिलो तरकारीको रूपमा मान्ने गरिन्छ । एन्टिअ’क्सिडेन्ट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदा’र्थहरूमा पाइन्छ, जसले हाम्रो श’रीरको तन्तुहरूमा हुने अस’रबाट बचाउँछ भने यसले श’रीरभित्र हुन सक्ने तना’वलाई पनि कम गर्ने गर्छ ।यिनीहरूमध्ये स्कुसमा माइ’रिसेटिन सबैभन्दा अधिक मात्रामा पाइन्छ ।
६ क्या’न्सर कम गर्न सहयोग उच्च पो’षणयुक्त फलफूल र तरकारीको उपभोगले विभिन्न प्रकारका क्या’न्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत पु¥याउने गर्छ । एक अध्ययनले निश्चित मात्रामा स्कुसको सेवन गर्दा त्यसमा रहेका यौगिकहरूले क्या’न्सर हुन सक्ने कोषिकामा त्यसको असर कम गर्ने गरेको देखाएको छ । यद्यपि यी नतिजाहरू पूर्ण क्या’न्सर प्रतिरो’धी भनेर प्रमा’णित तथ्य भने होइनन् । तर यसले क्या’न्सर कमगर्न सहयोग गर्छ भन्ने विषय भने विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित विषय हो । यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । ७. बुढेसकालमा हुने दृ’ष्टिदोष कम गर्न फ्रि रेडिकल भन्ने एउटा मुख्य सिद्धान्त हुन्छ । जसले श’रीरका विभिन्न कोषहरूमा क्षति पु¥याएर उमेर ढल्किँदै गएपछि हुने दृ’ष्टिदोष कम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । यसैले, भि’टामिन सी पर्याप्त पाइने यो तरकारीको नियमित सेवनले बुढेसका’लको दृश्य कम गर्न मद्दत गर्छ । ८ मि’र्गाैलाको कामलाई सहज बनाउन फ्याटी लि’भर डि’जिज भनेको एउटा यस्तो स’मस्या हो जसमा अत्यधिक बोसो क’लेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । क’लेजोमा जमेको धेरै बो’सोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा क’लेजोमा बो’सो जम्ने कामलाई यसले नि’यन्त्रण गर्न सक्छ ।